Ahoana ny fomba hiatrehana ny mpiara-miasa mafy loha: 12 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t! - Fifandraisana
Ahoana ny fomba hiatrehana ny mpiara-miasa mafy loha: 12 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Ny fijerena haingana ny famaritana ny ‘maditra’ sy ny fijerena ireo mitovy hevitra aminy dia mety hamela anao tsy hisalasalana ny amin'ireo fiarahana ratsy amin'ity toetra manokana ity.
Mafy loha ( adj ): fananana na fanehoana fahatapahan-kevitra tsy azo ovaina mba tsy hanovana ny fihetsika na ny toerana misy azy amin'ny zavatra iray, indrindra na dia eo aza ny fifamaliana na antony tsara anaovana izany.
maditra · malaso · mafy loha · fanahy iniana · be finiavana · tia tena · loha-kisoa · loha-omby * misavoritaka · mahasosotra · sarotra · mifanohitra
Fa alohan'ny handinihantsika fomba vitsivitsy hiadiana amin'ny hamafin'ny doka sy hanatsarana ny fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa mafy loha aminao, andao haka fotoana kely fotsiny hieritreretana ny lafy tsaran'ity toetra ity 'lesoka.
Ny zava-misy dia ny sasany amin'ireo mpandray anjara mavitrika indrindra amin'ny fiarahamonintsika no tsy nahalala afa-tsy ireo haavony feno hafanam-po ireo noho ny tanjaky ny sainy sy ny safidiny. Ny Apple mpanorina, Steve Jobs, dia ohatra mahazatra.
Manana ny fahavononany sy ny fikirizany mafy isika hisaotra ny fivoaran'ny teknolojia ao ambadiky ny fitaovana mety ampiasainao amin'izao fotoana izao hamakiana ity lahatsoratra ity. Aiza no hisy antsika raha tsy misy an'io?
Ary misy ohatra hafa tsy tambo isaina an'ny olona tena nahomby sy nanan-kery nandritra ny tantara izay zava-bitan'izy ireo dia vokatry ny fikatsahany irery ny tanjony.
Raha ny tena izy dia misy tsipika tsara eo amin'ny fizahan-toetra sy fikirizana. Na dia mety ho sarotra aza ny mifampiraharaha amin'ireo olona manana finiavana mafy - satria tsy ny fahaizan'izy ireo ny olona - ny fikirizana sy ny fahavonona no tena ilaina mba hahombiazana.
Inona no ifandraisany amin'ny fikatsahanao hanatsarana ny fifandraisanao amin'ilay namanao mafy loha?
Eny, tsy tokony hohadinoinao ny zava-misy fa ny toetra manasarotra azy ireo ny fiatrehana dia ireo zavatra mety hahatonga ny fifandraisanareo hifanaraka.
Ny fanapahan-kevitr'izy ireo dia midika fa tsy hiala mora foana amin'ny zavatra sarobidy izy ireo raha vao manolo-tena amin'izany, ka mahatonga azy ireo ho mpiara-miasa matanjaka sy azo antoka.
Ireo olona matetika sarotra (mety milaza ny sasany fa loha-kisoa) ireo olona ireo dia mety tsy ho mora indrindra hizara ny fiainanao.
Na izany aza, raha vao mijanona tsy mahita ny ditra ho ratsy ianao, atsaharo ny fanidiana azy ireo, ary ianaro ny fomba fampiasana tetika mahomby kokoa hanoherana ny toerana toa tsy mahasarika azy, dia eo amin'ny toeran'ny mpamily ianao.
Mety ho hitanao fa misaotra ny sakaizanao mafy loha koa ianao mahatonga anao ho tsara kokoa ho an'ny tenanao!
Inona avy ireo dingana azonao raisina mba hahatratrarana an'io fanovana io?
Tohizo ny horonan-taratasy hahalalanao…
1. Aza avela ho sorena ianao - miaina!
Ny fahatezerana sy ny fampisehoana ny fihetsem-ponao manoloana ny ditry ny vadinao dia tsy hanampy.
Raha asehonao fa sosotra na tezitra ianao dia hahazo fahatsapana fandresena.
Mila mandray fepetra ianao mba hilamina.
Rehefa manakaiky lohahevitra iray fantatrao fa mety hampiakatra fifanenjanana ianao, makà fotoana hialana amin'ny adin-tsaina mialoha.
Miaina fofonaina eo amin'ny 10 eo ho eo ianao dia hanampy anao hahatsapa ho milamina kokoa ary vonona hiatrika ny toe-javatra milamina.
Nandritra ny resaka, raha tsapanao fa miakatra ny hafanana dia miadana na miala amin'ny efitrano minitra vitsy fotsiny ianao hamoronana ny tenanao.
Ny teninao dia horefesina bebe kokoa ary noho izany dia mahomby raha milamina sy voangona ianao fa tsy mamoaka vava sy tezitra.
voafehiko loatra koa ve ny fifandraisako
2. Safidio tsara ny fotoanao.
Ny fotoana dia ny fiatrehana ny antsasaky ny loha maditra hafa rehetra.
Raha miasa saina izy na variana amin'ny raharaha hafa, dia tsy izao no fotoana hampiakarana olana misy tsilo.
Misafidiana fotoana izay tsy hisian'ny fanelingelenana ivelany ary afaka mifantoka mazava tsara ianareo roa.
Hamarino tsara fa nihinana tsara ianao ary ambany ny haavon'ny adin-tsaina ka samy manana ny toerana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po ary ny hery hizarana hevitra sy hijerena ny fomba fijery samihafa.
3. Aza adino ny maneho ny fitiavanao.
Mora tokoa ny manadino ny mitia rehefa miatrika toe-javatra iray izay mitarika ady eo amin'ny fifandraisanareo ny hamafin'ny vadinao.
Ataovy izay hampahafantaro ny olon-tianao fa tsy mitaky fepetra ny fitiavanao ary, na inona na inona vokany, dia mbola ho tianao ihany izy.
Amin'ity fanomezan-toky ity, na dia ny mpiara-miasa mafy loha indrindra aza dia mety ho vonona ny hanaiky lembenana kokoa mba hampisehoana ny fitiavany anao ho valiny.
4. Manotra an'io ego io.
Satria mihevitra ny olona maditra fa ny lalany no fomba tsara indrindra indrindra, dia tsy mandray am-pitiavana izy ireo raha lazaina fa misy fomba samihafa hanatonana zavatra.
Mety ho hitan'izy ireo ho toy ny fanafihana manokana mihitsy aza ny tolo-kevitra toy izany, na dia tsy izany no tanjonao.
Manomboka amin'ny fandokafana kely sy fanaovana izay hahatsapany ho tsara momba ny tenany izy ireo dia fomba iray tsara hampiakarana azy ireo.
Maneho fankasitrahana zavatra tsara vitan'izy ireo: “Fantatro fa nampahory ny olona tato ho ato. Gaga be aho ny amin'ny fomba vao nivarotanao, na eo aza ny zava-drehetra. '
Ny fomba egocentric an'ny sakaizanao mafy loha dia midika fa miahy kokoa ny toerana misy azy izy ireo noho ny an'ny hafa - eny fa na dia ny anao aza.
Hamarino tsara fa hitanao ilay soso-kevitra soloinao amin'ilay naroson'izy ireo dia handray soa amin'izy ireo. Hahatonga ny fahalianan'izy ireo izany ary mety hisokatra amin'ny fomba fisainanao izy ireo.
Raha, miaraka amina setroka sy fitaratra kely fotsiny ianao, dia azonao atao ny mampiasa ny fihodinanan'ny resadresaka ataonao mba handresena lahatra azy ireo fa io no hevitra mamirapiratra voalohany indrindra, dia hahatsapa ho tsara kokoa izy ireo.
Manenina aho fa namela ny vadiko ho an'ny vehivavy hafa
Tsy ny tetika mora indrindra nesorina io, fa tena mandaitra ary arakaraka ny ampiharanao azy, no hahatsapanao fa tsara kokoa ianao noho io fitondra-tànana io.
Ahoana ny fomba hiatrehana lolompo amin'ny fifandraisana: 12 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t
Ahoana ny fomba hiatrehana ireo dia lavitra ary hampiatoana ny heloky ny olona iray manandoka anao
Ahoana ny fomba hampianarana ny olona ny fitondrana anao
5. Aza milaza amin'izy ireo fa diso tafahoatra izy ireo.
Azo antoka fa tsy te handre ny namanao mafy loha fa diso izy ireo (na dia heverinao fa diso aza izy ireo).
Miteny zavatra toy izany 'Avy amin'ny zoro diso ianao,' na, mbola ratsy kokoa aza, 'Tsy azoko hoe maninona ianao no diso izao' ho toy ny fanofahofana akanjo mena amin'ny omby omby.
Hikatona tanteraka izy ireo ary tsy handalo mihitsy.
Aza hadino izany hazavao tsara fa tena mankasitraka ny fomba fijerin'izy ireo ianao ary manome lanja ny hevitr'izy ireo (miverena amin'ny fanodinana ego indray).
Lazao azy ireo fa manana hevitra mahafinaritra vitsivitsy izay efa nodinihinao tsara izy ireo. Mahatsapa ianao fa mety ho ireo ny valiny amin'ny toe-javatra hafa, fa angamba tsy ilay tarehinao izao.
Alao antoka fa hitanao io teboka io amin'ny fanazavana fa sarotra ny toe-javatra ary misy fomba fijery maro samihafa tokony hodinihina.
6. Hamarino tsara fa manana ny zava-misy rehetra izy ireo.
Ny toetra iray maditra ny mizara dia ny tahotra ny tsy fantatra.
Ny fanoherana ataon'izy ireo amin'ny fanaovana zavatra dia mety hiankina amin'ny maha zava-baovao azy, zavatra mbola tsy nataon'izy ireo talohan'izay, na satria manelingelina ny fanaony mahazatra.
Zava-dehibe, araka izany, ny hahazoana antoka fa manana ny zava-misy rehetra izy ireo izany dia hanampy azy ireo hatoky tena bebe kokoa momba izany.
Ny fanindriana ny tombony ho azy ireo dia ho famporisihana fanampiny - tsarovy izany ego izany!
Raha vantany vao manana sary mazava kokoa izy ireo dia ho hitany fa na inona na inona arosonao dia tsy mampatahotra toa izay natahorany.
7. Mifikitra amin'ny basinao indraindray.
Ny namanao mafy loha dia mety efa zatra manao izay tiany fotsiny satria manana fironana hiditra ianao rehefa miatrika ny fihevitr'izy ireo matanjaka.
Misy antony marobe hamaly anao: mieritreritra izy ireo fa hisafoaka na ho tezitra raha tsy 'mandresy', mino ianao fa tsy mendrika ny ezaka izany satria mazava ho azy fa manan-danja kokoa noho izy ireo noho ianao, na tsy manana angovo ampy hanoherana azy ireo fotsiny ianao.
Mila mampatsiahy ny tenanao ianao fa tsy manana doormat ianao ary manan-jo tanteraka hanana izany amin'ny alàlan'ny fanovana.
Angamba ho sarotra izany, saingy mila mijoro tsara ianao ary mamadika ny latabatra amin'ny sakaizanao.
Tadidio: raha tsy mandà mihitsy ianao dia tsy misy fanentanana ho an'ny olon-tianao hanova ny fombany.
Amin'ny manaraka tsy hahitanao zavatra mihoatra ny zavatra iray, na dia sarimihetsika hijerena azy fotsiny aza dia lazao azy ireo fa handeha ianao ary hahita izany amin'ny namanao fa tsy hifidy fotsiny amin'ny tongotrao.
Azo antoka, ho gaga be izany, fa hahita anao amin'ny maso vaovao izy ireo, amin'ny maha olona tsy azon'izy ireo atao mora foana.
Ny fandikana ny lamin'ny maha olona ekena anao hatrany dia hahatonga ny sakaizanao mafy loha hanaja kokoa ny zavatra ilainao sy tadiavinao.
Azo inoana fa handinika bebe kokoa ny hevitrao amin'ny ho avy izy ireo.
8. Ampio izy ireo hahatakatra ny dikan'izany aminao.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny olona maditra dia mety ho mpiara-miasa hentitra izay tsy milavo lefona amin'ny fifandraisana.
Raha tena miahy anao izy ireo, dia ny fandrenesana ny antony misy dikany lehibe aminao dia hanampy azy ireo handresy lahatra azy ireo hamela anao hanana izany.
Ho takatr'izy ireo fa tsy ny hoe marina na diso fotsiny, fa ny fanatanterahana ny zavatra ilainao sy ny fanirianao.
Aza hadino izany milaza aminy ny antony mahatonga ny soso-kevitrao hanolotra azy ireo fa tsy ny azy ireo hampifaly anao.
9. Afaka manome fahagagana ny fanomezana sy ny fandraisana kely.
Mety efa nahavita izany ho an'ny tenanao ianao, fa ny fiainana mifanaraka amin'ny olona maditra dia mitaky fanekena ambaratonga izay mety tsy manana zavatra amin'ny lalanao tanteraka.
Miaraka amin'ny marimaritra iraisana sy fifampiraharahana, mety ho afaka hihaona eo afovoany any ho any ianao.
Mety ho miadana ny fandrosoana, noho izany dia mila manam-paharetana ianao fa mety mila dingana vitsivitsy amin'ny zazakely vao afaka hanaiky ny sainao ilay namanao mafy loha.
Ny ezaka ataonao kosa dia haverina tsikelikely amin'ny fifandanjana tsara kokoa eo amin'ny filan'ny vadinao sy ny filanao manokana.
Ny lakilen'ny fikirakirana ny olona maditra dia ny fahatokisana ny hevitrao.
Raha vantany vao mihetsiketsika ianao na mihetsiketsika dia hihena ny fanajan'izy ireo anao ary mety ho tonga amin'ny sofina marenina daholo izay lazainao.
Mifanohitra amin'izany, na dia mila somary bluff kely aza ianao, ny fihetsikao toa ny hevitrao no tsara indrindra eto an-tany, dia hahatonga azy ireo hieritreritra fa tena fantatrao ny entanao ary mendrika ny henoina ianao.
Ny fampifandraisana olona mafy loha izay mihady mafy amin'ny rantsan-tànany amin'ny teboka manokana dia mety hampitahotra.
hey bayley tiako ho fantatra
Ny fihazonana ny lohanao, ny fihazonana ny masonao ary ny hijoroanao ho avo dia hanampy amin'ny fitomboan'ny fahatokisanao tena sy hahatonga ny hevitrao handresy lahatra kokoa.
Ary aza adino miaina , araka ny efa noresahintsika teo aloha!
Tsy misy maninona ny fanazaran-tena kely mialoha raha izany dia manampy anao hahatoky tena bebe kokoa amin'ny famoahana ny hevitrao rehefa tonga ny fotoana mety.
11. Aza miteny amin'izy ireo fa maditra izy ireo!
Ity no zavatra farany farany tadiavin'izy ireo ho re satria izy ireo, aleo atrehana, maditra.
Hahatonga azy ireo hiaro tena ary handavaka ny vodin-tongony mbola lavitra. Hihazakazaka izy ireo ary vao mainka hanohitra ny fanovana.
Mety ho zavatra sarotra indrindra ny manohitra ny fangatahana “Fa maninona ianao no maditra?” , nefa maneke ny fakam-panahy amin'ny loza mety hitranga.
12. Fidio tsara ny adihevitrao.
Tsy azo lavina fa mety mandreraka ny manandrana miady amin'ny zorony amin'ny mpiara-miasa izay mety ho tsy mahay miovaova sy be finiavana.
Ny fisafidianana ny adinao anefa no lakilen'ny fikirakirana azy ireo.
Amin'ny alàlan'ny fomba fiasa marina sy ny fampidirana ao an-tsaina ireo teboka etsy ambony, dia ho azonao atao ny mandresy lahatra azy ireo hanao fanovana tsara.
Ny zava-misy dia, raha mifanerasera amina olona tena mafy loha ianao dia mety tsy dia fahita firy ny 'fandresena' anao.
Raha izany no izy dia tena ilaina ny manokana fotoana handinihana raha toa ka misy olana manokana tokony hanidiana ny anjombona.
Angamba ny fifidianana izay hohaninao amin'ny datin'ny daty manaraka dia mety tsy dia raharaha lehibe ho anao, fa na handany Thanksgiving miaraka amin'ny fianakavianao ianao fa tsy ny azy dia mety ho zava-dehibe.
Tehirizo amin'ireo angovo lehibe ny herinao.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao amin'ny mpiara-miasa aminao maditra? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
famantarana fa vita ho an'ny tsara ny fifandraisana
maninona ny lehilahy no mihemotra rehefa mifankatia
ahoana no hampiononana olona malahelo
ny fomba hitiavana vehivavy misy olan'ny fandaozana